Ciidamo kala taageerayey ganacsato Puntland iyo Galmudug ah oo ku dagaalamay Gaalkacyo | SAHAN ONLINE
Ciidamo kala taageerayey ganacsato Puntland iyo Galmudug ah oo ku dagaalamay Gaalkacyo
GAALKACYO – Wararka aan ka halayno magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in laba maleeshiyo oo kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug oo kala taageersan ganacsato ay ku dagaalameen gudaha magaalada Gaalkacyo.
Dagaalkan ayaa ka dhacay Suuaqa magaalada Gaalkacyo,waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac,iyadoona dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay ay yihiin dad rayid ah.
Waxaa la sheegay in dagaalkan uu ka bilowday muran ku saabsan Bakhaar ku yaala suuqa magaalada Gaalkacyo ,wuxuuna dagaalkan yahay mid ka duwan kuwii horay uga dhici jiray magaalada.
Maleeshiyaadka ku dagaalamay magaalada ayaa ah kuwa ay ganacsatadu ka dambeeyaan.
Inta la ogyahay illaa hadda afar qof ayaa dagaalka ku geeriyootay tiro kalena dhaawac ayaa soo gaaray.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Galmudug C/rashiid Xaaji Carta oo VOA-da la hadlay ayaa sheegay inay ka maamul ahaan isku dayayaan in dagaalka la joojiyo iyagoo kaashanaya dhinac kale ee Puntland, iyagoo ka hortegaya in dagaalka isu bedelo dagaal weyn.
Xaaladda magaaladda Galkacayo ayaa caawa degan, mana jirto wax rasaas ah oo ka dhacaysa halkii maanta dagaalku ka dhacay, hase yeeshee waxaa jira feejignaan dadka shacabka oo laga baqayo in dagaalki iskiis mar kale u qarxo.
Waxaa hadda soo baxaya baaqyo ku aadan sidii loo joojin lahaa colaada kasoo cusboonaatay magaalada Gaalkacyo taasoo ay wadaan maamulada Puntland iyo Galmudug.
Gaalkacyo waxaa marar badan ku dagaalamay maleeshiyo kasoo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug.